Eid feiring 2018
Muslimiinta ee magaaladaan Sarpsborg oo soo dhameystay cibaadadii bisha Ramadaan una soo diyaar garowbay tukashada salaada ciida. Goobtani waa hool ay soo kireysay maamulka jaaliyada Somaalida Sarpsborg.
Bulsho-weynta Somaalida Sarpsborg oo ka kooban Rag, Dumar, Dhallinyaro iyo Caruurba oo aad u wada faraxsan ayaa ku soo wada jarmaaday hoolka loogu talo galo tukashada Salaada. Sida aan caadada u leenahay maalmahaan oo kale, waxaa laga farxiyaa caruurta, waxaa loo soo labisaa dhar qurxoon, hoolalka lagu dukado waxaa la keenaa cuntooyin fudud. Salaada dabadeed waa la is wada cafiyaa, waa la duceeyaa, dadka xanuunsana waa loo duceeyaa iyo muslimiinta kalaba.
Salaada bacdigeed, waalidiintu waxay waqti kale la qaataan caruurtooda oo qoys kasta goobta uu jecel yahay ayuu geeyaa caruurtiisa. Annaga reer Sarpsborg si wanaagsan ayey noogu dhamaatay tukashadii iyo xafladii loogu talo galay maalintaas farxadda badan ( Kulla Caam Wa Antum Bil Kheyr ) .